Sidee Spotify ma shaqeeyaan?
Spotify waa shaqo cajiib ah oo ilaa ay ku dhiirigelinayaan in ay u soo music oo dhan. Madal Tani waxa ay qeexidda cusub si geeyo music iyo la updated daqiiqad kasta in ay bixiyaan artist kasta fursad ay ku kala bixiyeen shaqo iyo in ay dhegeystayaashu mudnaan inay ku raaxaystaan ​​curiyay kuwa. Waad la yaabi lahayd sida codsigan ka shaqeeya iyo sidee qaar ka mid ah muuqaalada cajiib ah taas geeyo software si dhab ah loo isticmaalo. Qoraalka soo socda ay diiradda saari doonaan hadlayaan dhowr ka mid ah qaababka ay heshay mahadnaq ku filan.
Qaybta 1.How Spotify shaqeeyaa online / offline?
Qaybta 2.How shuqulladiisa sameeya radio Spotify
Qaybta 3.How Spotify ka shaqeeyaa PS4
Qaybta 4.How Spotify isticmaalaya farsamada P2P ah
Qaybta 5.How soo bixi oo isticmaal ripper Spotify?
1.How Spotify shaqeeyaa online / offline?
Waxaad dhegaysan kartaa track kasta oo la heli karo in database Spotify inkastoo laga heli karaa si waafaqsan Times la raadinta doorasho fudud. Marka aad login network aad u helaan million dhawaaqa kuwan raadkaygay iyo videos ay leeyihiin. Playlists waxaa si qurux badan curated si loo waafajiyo niyadda iyo sidoo kale waxaad samayn kartaa playlists caadadii Bixiyey aad ugu cad cad.
Laakiin haddii aad rabto in lagu badbaadiyo kuwan raadkaygay in qalab aad iyo iyaga offline raaxaysan, halkan waa muujinta offline in yimaado anfacaya.
Dooro track aad rabto inuu u ciyaaro. Si horyaalka xaq aad ka heli lahayd 'Available offline' toggle biiro, shid si hagaagsan track ay u qalab aad. Haddii kale, waxaad xaq u riixi kartaa wadada dooro offline doorasho laga heli karo menu popup ah.
2.How shuqulladiisa sameeya radio Spotify
Waa hab cabsi in ay dhegeystaan ​​idaacadaha in ay yihiin kartoo iyo muusig habka kaliya ee aad rabto, markii aad rabto in aad ku sifayn iyo aad door bidayso. Spotify si toos ah u abuuraa liiska track random si ay u sameeyaan xarun dalwaddii radio in ay la kulmaan waxa aad dalbatay. Waxaad dooran kartaa in fanaaniintu ay aad jeceshahay, xannibi kuwa aadan sameyn, sidaas oo kalena haatan waxaad heli kartaa channel ah shakhsi radio tahay farshaxan aad ugu jeceshahay. By default waxaad ka heli doontaa idaacadaha lagu talinayaa in uu ku salaysan artist aad u dhagaystaan ​​si joogto ah ama ku sifayn aad jeceshahay. Fanaaniinta la mid ah ayaa lagu talinayaa in ay ka garab idin keeni doontaa doorasho badan waxaad ka heli kartaa.
In la abuuro a idaacada cusub click 'abuuro saldhig cusub' button Midigta sare ee suuqa kala Idaacada. Ku dar kuwan raadkaygay iyo badbaadin saldhigga
3.How Spotify ka shaqeeyaa PS4
Sony ayaa soo jeedisay adeeg cusub music diyaar u isticmaala Playstation. The Music pre-jira Unlimited by Sony waa la joojiyey, oo hadda aad ka heli kartaa adeegga music jecel, Spotify ee qalabka ay. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa furan codsiga Spotify ku Console ah. Page login A muuqan lahaa, xubnaha si fudud u geli karo halka users cusub yeelan doonaan in ay is-adeegga. The interface Spotify eegi lahaa la mid ah interface PS, laakiin ma waxaad ka heli doontaa farqiga badan ee labada.
Isticmaalayaasha ayaa heli kara playlists iyo tareenka, ku dar kuwan raadkaygay in aad ururinta ee click ah ka raadi aad ugu cad cad. Waxaa jira niyad jab ah, maxaa yeelay, dadka isticmaala ma isticmaali kartaa iyada oo ugu cadcad farshaxan ama albums ay badbaadisay in ururinta.
4.How Spotify isticmaalaya farsamada P2P ah
P2P (Peer-fadeed) waa hab loo qaybiyey shabakadaha halkaas oo dadka isticmaala ku wadaagaan hantida oo ay u sameeyaan shabakad ka shaqeeya iyada oo aan loo baahan yahay in ay helaan in ay Guntin dhexe. Saasuuna facooda waa loogu macaamiisha khayraadka ku jira unugyada network, bandwidth, kaydinta iyo processing labadaba.
Users Spotify waa inuu arkay in markii geeyo iyo naqdida badan network Spotify ah waa mid aad u yar marka loo eego adeegyada kale. Tani waa sababta oo ah waxa uu abuuray shabakad halkaas oo ay jiraan wax loo baahan yahay si ay u helaan database dhexe kaydinta (server kaydinta) muusikada ciyaaro halkii uu u buffers goobta deegaanka, yaraynta waqtiga loding iyo khayraadka.
5.How Spotify isticmaalaya farsamada P2P ah
Dooxeen waxaa loola jeedaa ama audio file video dayanayaan ka qalab lagu kaydiyo sida disk adag ama ilo kale oo la mid ah codsi ama database online ah.
Mararka aad u jeclaan lahaa hees ku Spotify oo aad rabtid in aad u badbaadin qalabka sida file mp3 ah iyo ma ahan oo keliya ku Spotify. Laakiin, waxaad awoodi waayeen inay sidaasi sameeyaan? Oo walwal No sababtoo ah hadda aad samayn karto oo dhan in aad rabto in aad la rippers ah. Dooxeen ha lahaa waad dhagaysan hoorto lacag la'aan ah, download in qalab aad, nuqul oo tareenka la wadaag saaxiibadaada. Waxaad edit karaa tareenka doono. Download software ripper oo fur codsiga.
Marka aad codsiga furo, furo adeega Spotify ah. Riix badhanka rikoorka on ripper ka dibna muusiko ku Spotify. Marka music uu bilaaban doono Spotify, ripper si toos ah uu bilaabo duubo, iyadoo la isticmaalayo afhayeenka sida il of music ah. Save track lagu duubay oo aad diyaar u tahay in ay tagaan.
Sida lagu Helo Spotify Premium Free?
Sida loo Cancel Spotify Premium iyo Cancel Trial Spotify
Sidee inuu saxiixo ama Gal Spotify Account
Waxaad Ku Cayaarin habboonayd siyaabahan si wadaag Playlists on Spotify
Talooyinka Billowga Spotify Username, Password Spotify
> Resource > Spotify > Sidee Spotify shaqeeyaan?